Gbasara Anyị |
Fujian Jinjiang baishiqing uwe ịkpa ákwà Co., Ltd.dị na ndịda ọwụwa anyanwụ ụsọ oké osimiri China, n'akụkụ ya na Zhejiang Province na northeast, Jiangxi Province na northwest, Guangdong Province na ndịda ọdịda anyanwụ, na-eche ihu Taiwan Province gafee Taiwan Strait na ndịda ọwụwa anyanwụ. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1990, nwere ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe na-arụpụta uwe, anyị bụ ndị ọrụ mmepụta ụdị uwe ime na akwa nnukwu ụlọ ọrụ. Ebe a na-ewu ya bụ square mita 15000.
Anyị nwere ụdị isi atọ
uwe ime, uwe yoga na uwe eji egwu mmiri
Uwe ime ime anyị na-agbaso:na-agbaso ọdịdị ahụ, mma na obi; ojiji nke akwa anyị na-agbaso: nke ọma na nke zuru oke, ahụike mbụ. N'ihe banyere teknụzụ,anyị na-agbaso:depụta ahụ zuru oke, nwee obi ike ma soro ya mgbe niile. Anyị na-ahọrọ akwa dị elu iji mee uwe yoga, nke nwere ike ịkpọ nkụ ma kpoo ume ngwa ngwa. Kwesịrị ekwesị maka ịgba ọsọ, yoga, ịwụli elu, akụrụngwa egwuregwu na mmemme egwuregwu ndị ọzọ.
Boysmụ nwoke na ụmụ agbọghọ nwere ike iyi uwe mmiri. Njirimara akwa: adụ, nke ọma, ihicha ngwa ngwa, na-adịghị egbu egbu. Designdị nhazi bụ ihe kachasị ewu ewu taa.
Ihe ndị dị n'elu bụ ngwaahịa anyị, na ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa sitere na ndị na-azụ otuto dị ukwuu na otuto dị iche iche.
Mmadụ Bịa na-ajụ ase
Ozi: Kpọkọtanụ ndị nwere okwukwe, gbalịsie ike inweta otu nghọta; Wuo usoro ntinye zuru oke iji nye uwe na ọrụ dị elu; Mepụta ndụ ka mma site na mbọ anyị!
Ihe omuma ihe omuma: Nọgide na-eji asọmpi dị iche iche dị n'ihu, jigide mmepe siri ike.
Uru: Iguzosi ike n’ezi ihe na izi ezi Ndị ahịa mbụ Ndị mmadụ na-agbasi mbọ ike
Mmụọ Mmụba: Anyị na-eme! Anyị nwere ike!